ချစ်ရအောင်: ဘလောက်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် အပိုင်း(၃)
ဘလောက်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် အပိုင်း(၃)
Posted by Unknown Blogs Post
1.3. Moderate Comments
ဘလော့ဂ်များတွင် ပိုစ့်တစ်ခုချင်းစီကို Comment မှတ်ချက် ပေးလို့ရသည်။ မည်သူမဆို ပေးလို့ရအောင် ခွင့်ပြုနိုင်သလို
ကိုယ်ခွင့်ပြုလိုသူများကိုသာ မှတ်ချက်ပေးနိုင်အောင် သတ်မှတ်ပေးထားလို့လည်း ရသည်။ Blospotက အသင့်ပေးထားသော Comment System ကို အသုံးပြုလို့ ရသလို အခြားကိုယ်နှစ်သက်သော စနစ်ကို အသုံးပြုမည် ဆိုလျှင်လည်း အဆင်ပြေသည်။ ဤနေရာတွင်မူ Blogspot မှအသင့်ပေးထားသော ကွန်မန့် စနစ်အကြောင်းကိုသာ ရှင်းပြသွားပါမည်။
Moderate Comments ဆိုသည်မှာ Comments များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အခြားသူများကို မမြင်စေချင်သော အချို့ သော Comments များကို ခွင့်မပြုသေဲး ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ ပယ်ဖျက် ပစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ရှုသော မည်သူကိုမဆို Comments လုပ်ခွင့် ပေးနိုင်သလို၊ Comments ပေးနိုင်ခွင့်ကို သတ်မှတ်ထားသော သူများမှသာ ရရှိရန် သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်မူ မိမိဘလော့ဂ်၏ Comment စနစ်ကို Setting အောက်မှ Comments ကဏ္ဍတွင် သွားရောက် ပြင်ဆင်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ Blogger ၏ အသင့်သုံး မှတ်ချက် စနစ်မှာ လူတိုင်းကို မှတ်ချက်ပေးနိုင်အောင် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုစနစ်ကို သွား၍ မပြင်ဆင်သမျှ မိမိဘလော့ဂ်တွင် လူတိုင်းပေးသော မှတ်ချက်များကို အလိုအလျောက် ဖော်ပြနေမည် ဖြစ်သလို ယခု Posting>Moderate Comment ခလုတ်ကို နှိပ်လျှင်လည်း ဘာမှ မြင်ရမည် မဟုတ်ပေ။ Moderate လုပ်စရာ Comments မရှိဘူး ဟူ၍သာ ပြောပေလိမ့်မည်။
2. SettingSetting ကဏ္ဍတွင် အပိုင်း (၇)ပိုင်း ရှိသည်။
6. Site Feed
8. Permissions စသည်တို့ ဖြစ်သည်။2.1. Basic
ယင်းကဏ္ဍသည် ဆိုဒ်တစ်ခုလုံး၏ အခြေခံ အဆင့်ဖြစ်သည်။ အဓိက အပိုင်း ကိုးပိုင်း ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့မှာ
1. Title (ဘလော့ဂ် ခေါင်းစဉ်)
2. Description (ဘလော့ဂ် အကြောင်းအရာ)
3. Add your blog to our listings? (Blogger.com မှာ ဖော်ပြမှာလား)
4. Let search engines find your blog? (Search Engine တွေကို အလိုအလျောက် ရှာခွင့်ပြုမှာလား)
5. Show quick editing on your blog? (ပိုစ့်တွေကို အလွယ်တကူ ပြင်တဲ့ ခလုတ် တပ်မှာလား)
6. Show email post links? (ပိုစ့်တွေကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့လို့ရတဲ့ လင့်ခ် ထားပေးမှာလား)
7. Show compose mode for all your blogs? (ဘလော့ဂ်တွေမှာ တိုက်ရိုက်ပိုစ့် တင်တဲ့စနစ် ထားမှာလား)
8. Show transliteration button for your posts? (စာရိုက်တဲ့ နေရာမှာ ဘာသာပြန်တဲ့ ခလုတ် ထားမှာလား)
9. Delete your blog? (လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ဖျက်မှာလား)